Meesha Safarka ee ay ugu Jecelyihiin Dadka Ameerikaanka ah Xagaagan Hadda La Shaaciyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Meesha Safarka ee ay ugu Jecelyihiin Dadka Ameerikaanka ah Xagaagan Hadda La Shaaciyay
Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Ka dib laba sano oo isku xigta oo lagu asteeyay saameynta faafitaanka Covid-19 ee dalxiiska, bixiyaha isku xirka gacanta, Ubigi, ayaa daaha ka qaaday isbeddellada safarka caalamiga ah inta lagu jiro xagaaga.
Gaar ahaan, waxay ka warbixisay meelaha dalxiiska ee Maraykanku jecel yahay iyadoo lagu saleynayo isticmaalkooda xogta xagaaga.
Daraasadan caalamiga ah waxay ku salaysan tahay falanqaynta isticmaalka qorshayaasha xogta mobaylada eSIM oo muunad ka kooban 10,000 isticmaale ah.
Waxaa loo qaabeeyey inta u dhaxaysa Luulyo iyo Ogosto 2021 iyadoo loo eegayo waddanka isticmaalayaashu deggan yihiin.
Ugu horreyntii, heerka caalamiga ah, waxaa jiray kor u kac aad u weyn oo ku yimid isticmaalka xogta inta lagu jiro xagaaga, maadaama xannibaadaha safarka laga qaaday dalal badan. Mugga iibka ee qorshooyinka xogta ayaa labanlaabmay bilihii Luulyo iyo Ogosto 2021 marka la barbar dhigo Meey iyo Juunyo 2021, wuxuuna saddexjibaarmay (+ 246%) marka la barbar dhigo isla muddadaas 2020.
Dhanka dalka, Americans ayaa noqday horyaalkii eSIM korsashada, iyaga oo isu dhigaya isticmaalayaasha ugu horreeya ee qorshayaasha xogta dibadda iyo gudaha labadaba. Waa maxay sababta iyo halkee u tageen?
SHARCIYADA MUHIIMKA AH EE BARASHADA MAREYKANKA
Ameerikaanku waxay ahaayeen hormuudka isticmaalka xogta wareega
• 73% xogta ay isticmaaleen dadka Maraykanku waxa loo isticmaalay dibadda.
Yurub waxay ahayd meesha ugu sareysa ee loo dalxiis tago ee Maraykanku xagaagan
• 55% xogta ay isticmaaleen dadka Maraykanka ah ee ku biiraya qorshaha xogta waxa laga fuliyay Yurub, taas oo muujinaysa rabitaankooda ku aaddan deegaankan.
Wadamada Yurub ee ay booqdeen, Maraykanku wuxuu si gaar ah u doorbiday Faransiiska, iyada oo 21% wadarta isticmaalka xogtooda ee dalkan xagaagan.
Dalxiisayaal Maraykan ah ayaa sidoo kale aaday meelo kale oo Yurub ah sida Spain (6%), Greece (6%), Great Britain (6%), iyo Italy (5%).
Isticmaalka eSIM ee dalka oo dhan oo muhiim ah sidoo kale
Halka ay dadka Maraykanku inta badan u isticmaali jireen eSIM-kooda dibadda, waxay sidoo kale isticmaaleen qorshayaasha xogta si ay ugu safraan gudaha Maraykanka 27% wadarta xogta isticmaalkooda muddadaas.